Kismaayo News » Uhuru Kenyata oo ku guulaystay doorashadii ku celiska
Uhuru Kenyata oo ku guulaystay doorashadii ku celiska
Kn: Gudiga doorashooyinka ee madaxa banaan ee Kenya ayaa ku dhawaaqay inuu doorashadii ku celiska ahayd uu ku guulaystay madaxweynihii talada dalka hayay, Uhuru Kenyata.
Mr Chebukati, gudoomiyaha gudiga doorashooyinka Kenya ayaa shaaciyay in Uhuru Kenyata uu 7, 616, 217 qof oo codaysay uu cod kooda helay 7, 483, 895 qof taasi oo u dhiganta in ku dhawaad 92% uu Uhuru helay codadka doorashadii ku celiska ahayd.
Marka la fiiriyo dadka u diiwaan gashaanaa inay codeeyaan oo kor u dhaafayay sagaal iyo toban milyan iyo bar ayaa waxaa ka codaysay oo kaliya wax ka yar 39%, waxaana sababay ururka mucaaradka ee Odinga madaxda u yahay oo qaadacay inay qayb ka noqdaan doorashada ku celiska ah.
Uhuru oo saxaafadda la hadlay ayaa sheegay inay guushiisani xaqiijinayso inuu markii horaba ka guulaystay ninkii la tartamayay, balse uu qadariyay dastuurka dalka iyo go’aankii maxkamadda sare, wuxuuna intaasi ku daray inuu mar kale aqbali doono hadii maxkamadda sare ay mar sadexaad xukunto in doorashada lagu celiyo.
Ayadoo markii horaba ay rabshado ka socdeen gobollada ay ku badanyihiin mucaaradku ayaa hadana caawa waxaa la soo sheegayaa shaqaaqooyin hor leh oo ka bilawday deegaamada ay ku xoog badanyihiin taageerayaasha xisbiga mucaaradka, waxaana laga cabsi qabaa in xaaladdu sii murugto ilaa ay ka gaarto barako maleh. Ciidamada amaanka iyo kuwa milatariga oo magaalooyinka qaar lagu daadiyay ayaa isku dhabar jabinaya inay xakameeyaan kooxaha qaswadayaasha ah ee amaanka wax u dhimaaya.
Dad badan ayaa xabsiga loo taxaabay tan iyo intii la bilaabay doorashada ku celiska ah, halka tobaneeyo ruux ay ka dhimatay, tiro kalana ay ka dhaawacantay.